#3 - Ubungakanani benkosi enkulu ebhedini ecaleni komlambo iMekong - I-Airbnb
#3 - Ubungakanani benkosi enkulu ebhedini ecaleni komlambo iMekong
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguRattana
Indawo yam ingaphesheya kolwandle, ecaleni komlambo iMekong, iindawo zokutyela kunye nemibono engaqhelekanga. Yonwabele indawo yam yokuhlala emoyeni, ubumelwane, indawo ezingaphandle, ukukhanya, kunye nebhedi etofotofo. Ukungena simahla ngomnyango ongasemva 24h/24h, unezakho izitshixo zokufikelela, indawo yegadi yokupaka ibhayisekile yakho okanye i-motobike, unokufumana ikofu yasimahla okanye iti nanini na kwibalcony (indawo yokutshaya), Singathanda ukwenza -15 Isaphulelo sepesenti kwisidlo sakho kwindawo yethu yokutyela iSmile Dee.
Isiqhelo esidala se-colonial villa ngo-1960 yaphinda yatsha, ngokugcina isakhiwo esidala, sinamagumbi amakhulu, iisilingi eziphezulu, igumbi lokuhlambela labucala kwigumbi ngalinye, ishawari yamanzi ashushu, kunye nesimbo saseFransi esihonjisiweyo.
4.71 · Izimvo eziyi-139
Kude kude nesikhululo seenqwelomoya iWattay International 4km, 8mn ngemoto, ingekude ukusuka kumbindi wedolophu 10 imizuzu yokuhamba, edlamkileyo kakhulu ngokuhlwa, iindawo zokutyela ezininzi kwinqaba. Imakethi yeBig Nigth iqala ngentsimbi yesi-6pm (bona iifoto), ukuhamba ngeenyawo, umthambo wokuziqhelanisa nomthambo ngaselunxwemeni lomlambo kunye nezinye izinto ezinomtsalane.
Umbuki zindwendwe ngu- Rattana
Sikhona ukukukhokela kwaye ufumane imfuno yakho, unokuthenga amathikithi ebhasi ukuya eVangvieng, eLuang Prabang okanye abanye kwindawo yam, (umzekelo: ukuya eVangvieng 50 000kip / nge-$ 6) i-van iya kukulanda kwiNdlu yeeNdwendwe xa ixesha layo ukuya, siye iibhayisekile irenti 10 000kip/day ($ 1.2) kakhulu.
Sikhona ukukukhokela kwaye ufumane imfuno yakho, unokuthenga amathikithi ebhasi ukuya eVangvieng, eLuang Prabang okanye abanye kwindawo yam, (umzekelo: ukuya eVangvieng 50 000kip /…